Sida loo dar Album farshaxanka in MP3 u Mac
> Resource > Video > Sida loo dar Album Art in MP3 on Mac
Music uu noqday qayb ka mid ah nolosheenna. Wixii ku caashaqa oo waalan music, waxaa laga yaabaa in aad soo ururiyay in ka badan kumanaan heeso ee kombiyuutarka. Laakiin waxa uu noqonayaa mid ka kaaftoomi marka aad isku daydo inaad wax saxno ama si deg deg ah ka heli mid ka mid song qaarkood. Maxaa kaa caawin kartaa in Xaaladahan oo kale? Haa, farshaxanka album hubaal indhahaaga siin doonaa qalbi qabowsado qaar ka mid ah oo gacan ka helidda songs si fudud. Laakiin farshaxanka album waxaa mar kasta ka maqan haddii MP3 files waxaa lagu duubay online ama dooxay ka videos ama CD. Sidaas daraadeed waxaad u baahan doontaa ah editor tag wanaagsan si ay uga caawiyaan buuxin songs la arts. Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) waa khabiir ku ah arimahan. Waa ku dari kartaa tahay album dhammaan MP3 files leh qasabno yar. Looma baahna in lagu daro tahay album in mp3 mid mid, laakiin dhigay oo dhan MP3 files barnaamijka si loo ogaado cover farshaxanka in Dufcaddii. Waxay u egtahay weyn, soo maaha?
Download First this barnaamijka Mac si loo soo dajiyo. Markaasaa waxaa u furo si ay u helaan diyaar iyo waxaad ka heli doontaa interface a hir loogu talagalay fudud isticmaalka. Haddaba, waxaan ka hadli doonaa sida loo dar farshaxanka in MP3 on Mac sida hoos.
1 files music Import in TunesGo
Marka aad furto barnaamijka, waxa ay bilaabi doonaan in ay ku darto oo dhan music ku saabsan Lugood u tab nidaamsan Lugood, taas oo macnaheedu yahay in aad uma baahna in ay soo dhoofsadaan playlists Lugood gacanta.
Si aad ku dari MP3 files ka folder deegaanka, waa in aad si tab ah oo eynaan Music meesha aad riixi kartaa batoonka Open File ama file kaliya jiitaa-iyo-hoos u dhac ama folder in ay dajiyaan oo dhan MP3 files tagaan.
2 dar farshaxanka album in MP3
Dooro hees in mid ka mid ah isha ah oo eynaan Lugood ama Music nidaamsan, guji Aqoonso inuu ku soo bilowdo isagoo intaa ku daray in MP3 farshaxanka. By jidkii, inta lagu guda jiro geeddi-socodka, macluumaadka ID3 iyo lyrics ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa.
Notes: 1. Waxaad dooran kartaa dhowr heeso iyo riix batoonka Aqoonso in meel la mid ah.
2. Haddii aad riix batoonka Scan dusheeda oo sii laba checkbox ee la doortay, barnaamijka raadin kartaa heeso aan la aqoonsan oo soo calaamadiyaan. Sidoo kale waxaa lagu ogaan doonaa oo dhan songs labalaabka. Waxaad laga yaabaa inaad sugto in muddo ah haddii maktabadda music aad tahay mid aad u weyn.
Ka dib markii warbixin la aqoonsaday, guji Codso in aad ku darto macluumaad cusub oo file MP3 ah.
3 Habee macluumaad music ah
Haddii aadan ku qanacsanayn macluumaadka la ogaado si toos ah, kaliya riix "qalin-in-buugga" icon iyo dar image deegaanka ama nooca in macluumaad kasta oo aad jeceshahay.
Tallaabooyinkayga oo dhan ka dib, waxaad ka heli kartaa music macluumaad buuxa oo ay ku jiraan arts album, kaas oo samayn doona waxa ku haboon si ay u maareeyaan dhan MP3 files. Sii go a oo aad ka heli kartaa qaababka ka badan fanaaniinta.
Talo: Waa maxay tahay album?
Tahay Album, sidoo kale loo magacaabay cover album farshaxanka, farshaxanka album ama kaliya farshaxanka, waa file ah image ku daray in ay music iyo farsamo ahaan qayb ka mid ah tag ID3 marka daba noqonayaa in version labaad. Waxaa kala duwan ee noocyada liiska buuxa ee 21 Check halkan si aad u aragto faahfaahin dheeraad ah.